Arrimaha ku gadaaman Fadeexadda ku dul Habsatay Macron & Go’aanka Dunida Islaamka | SMC
Home WARARKA MAANTA Arrimaha ku gadaaman Fadeexadda ku dul Habsatay Macron & Go’aanka Dunida Islaamka
Arrimaha ku gadaaman Fadeexadda ku dul Habsatay Macron & Go’aanka Dunida Islaamka
Erdogan ayaa markii labaa asbuuc gudihiis ku celiyey in “maskaxda laga baaro” madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, xilli ay sii kordheyso carada ka dhalatay hadal uu ugu gefay Islaamka.
Tan iyo Jimcihii, baraha bulshada waxaa hareeyay dhaleeceyn loo jeedinayo Macron dalal ka yimid galbeedka illaa bariga, oo ay ku jiraan UK, Kuwait, Qatar, Falastiin, Masar, Algeria, Jordan, Saudi Arabia iyo Turkey.The spat between France and Turkey has drawn in world leaders as people in Muslim-majority countries organise street protests, including in Idlib.
Wasaaradda arrimaha dibedda Pakistan ayaa Isniintii u yeertay safiirka Faransiiska ee Islamabad si uu wax ugu waydiiyo faallooyinka Macron.
Tallaabadan ayaa timid maalin kadib markii Raiisel wasaaraha Pakistan Imran Khan uu warqad u qoray madaxa Facebook Mark Zuckerberg uu kaga dalbaday in laga mamnuuco waxyaabaha Islaam naceybka ah baraha Facebook.
Qureshi ayaa sheegtay in Pakistan ay ku boorrisay Qaramada Midoobay “in ay fiiro gaar ah u yeelato oo ay talaabo ka qaado sheekooyinka ku saleysan naceybka ku saleysan Islaamka.”
Dibadbaxayaasha ayaa mudaaharaadyo ka dhigay Axaddii gobollada ay dagaalladu ka socdaan ee Suuriya oo weli ka baxsan gacanta dowladda waxa ayna gubeen sawirrada Macron, sida uu sheegay kormeeraha dagaalka ee Xuquuqda Aadanaha Suuriya.
Ilaa 70 qof ayaa ku mudaharaaday caasimada Libya ee Tripoli, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaalada wararka ee AFP. Qaarkood waxay gubeen calanka Faransiiska waxayna ku tunteen sawirada madaxweynaha Faransiiska.
“Muslimiin ahaan, waxaa waajib naga saaranyahay inaan ixtiraamno nebiyada oo dhan, sidaa darteed waxaan ka rajeyneynaa wax la mid ah diimaha kale oo dhan,” ayay tiri haweenay lagu magacaabo Fatima Mahmud, oo 56 jir ah ”Dembi ka dhigista diinta Islaamka iyo Muslimiinta ma ahan in ay ilaaliso nabadda bulshada Faransiiska.” Ayay hadalkeeda raacisay.
Falastiiniyiinta ayaa dhankooda gubay sawirrada Macron, iyagoo ugu yeeray hadalkiisa “weerar iyo aflagaado ka dhan ah Islaamka”.
“Waxaan cambaareyneynaa faallooyinka madaxweynaha Faransiiska… iyo qof kasta oo xumeynaya Nebi Muxamed, ha ahaato hadal, ficil, tilmaamo ama sawirro,” ayuu yiri Maher al-Huli, oo ah hoggaamiyaha kooxda Xamaas ee Falastiin.
Lubnaan, Xisbullah waxa ay cambaareysay “cay ula kac ah” oo loogu gafay Nabi Muxamed NNKH.
Rabaa Allah, oo ah garabka taageersan Iiraan ee Ciraaq, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in hal bilyan iyo baRqof oo adduunka oo dhan ah ay cawaaqib xumo la kulantay, Iyaga oo sheegay in ay “diyaar u yihiin in ay ka jawaabaan goorta iyo meesha ay doonaan”.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Morocco ayaa sidoo kale “si xoog leh” u cambaareysay sii wadida daabacaadda Sawaarida, war ay Qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee MAP.
Wasiirka Arimaha Islaamka ee Jordan Mohammed al-Khalayleh ayaa sheegay in “aflagaadeynta” aysan aheyn arin ku saabsan xoriyada shaqsiga laakiin ay tahay dambi dhiiri galinaya rabshadaha.
Dhanka kale, Jean-Luc Melanchon, oo ah madaxa xisbiga garabka bidix ee France ee xisbiga Unbowed France ahna xubin baarlamaanka ka tirsan, ayaa sidoo kale weeraray Macron.
“Macron gebi ahaanba wuu lumiyay xakameyntii xaalada. Hadalada Erdogan, Faransiiska waa la liiday, la bahdilay oo lagu qoslay. Waa maxay istaraatiijiyada Macron? Muxuu qorsheynayaa inuu sameeyo ka sokow tweet-ka? ” Ayuu isweydiiyay.
Laakiin madaxweynaha Faransiiska wuxuu taageero ka helay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha bulshada Yurub.
Axaddii madaxa siyaasadda arrimaha dibedda ee Midowga Yurub Joseph Borrell wuxuu sheegay in ereyada Erdogan ay ahaayeen “wax aan la aqbali karin” wuxuuna ugu baaqay Turkiga in ay joojiso “halgankan halista ah ee iskahorimaadka ah”.
Previous articleXOG: Fahad Yaasiin oo safar qarsoodi ah ku tegaya Jowhar, (Ujeedka & Macluud laga helay)
Next articleDhageyso Maamulka Axmed Madoobe oo Lagu Eedeeyay Dilkii Cabdullaahi Shigshigoow